पहिलो नजरमै सुशिला प्रवाशको दिलमा बसिन् – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । १८ पुष २०७७, शनिबार ०९:३३ मा प्रकाशित
देख्नेवित्तिकै कसैलाई आहा ! भन्नु र मनमा सजाउनु फरक कुरा हुन् । जो कोही देख्ने वित्तिकै मनमा बस्न सक्दैनन् । हेर्दा राम्रो जसलाई पनि भनिन्छ । र विवाहका लागि भने सयौंपटक सोचिन्छ । राम्रो मान्छे सबैको दिलमा बस्न सफल हुँदैनन् पनि । तर प्रवाशकुमार शाक्य भने मजाकको रुपमा केटी हेर्न गएका थिए । ख्यालख्याल गर्दै अंकलसँग केटी हेर्न गएका शाक्यको मन सुशिला श्रेष्ठले जितिन् । शाक्यले सुशीलालाई देख्ने वित्तिकै मन पराए । मन पराएपछि सुशीलालाई नै विहे गर्ने निधो गरे । अनि विहे गरे ।
लाइसेन्स बनाउन जाँदा…
प्रवाशकुमार शाक्य २०५६ सालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाउनको लागि नेपालगन्ज गएका थिए । उनी नेपालगन्जमा आफ्नो माइला बुबाको घरमा बसेका थिए । उनका माइला बुबाले छोरो जवान भएकाले अब विहे गर्दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाए । साथमा उनको माइला बुबाको साथी पनि थिए । तीनै साथीले नेपालगन्जको खजुरामा एउटा केटी छ, हेर्न जाने हो त ? भनेर हाँसो मजाकमा नै सोधे । प्रवाशले पनि मजाककै शैलीमा भने, ‘के हुन्छ र ? जाउँ न त हेर्न ।’ दुबैको हाँसो मजाकमा नै उनीहरू साँच्चिकै केटी हेर्न खजुरा गए ।
प्रवाश सुर्खेतबाट लाइसेन्स बनाउन नेपालगन्ज पुगेका थिए । तर उनको जिन्दगीकै लाइसेन्स बनाउन गएजस्तै भयो । उनी आफ्ना अंकल र अंकलका साथीसँग केटी हेर्न गए । उनी हेर्न गएको केटी अरु कोही नभएर सुशीला श्रेष्ठ थिइन् । सुशीलाले त्यतिबेला खजुराबाट शिशु स्याहार कक्षालाई पढाउन राँझा पुग्थिन् । त्योदिन उनी बिरामी भएर घरमै बसेकी थिइन् । आफूलाई हेर्न आएको कुरा थाहा पाएपछि सुशीलाले प्रवाशलाई चिहाएर हेर्दै थिइन् । प्रवाशले उनलाई देखिहाले । गोरी सुशीलालाई देख्ने बित्तिकै प्रवाशले मन पराए । पहिलो नजरमा नै सुशीलालाई शाक्यले दिलमा सजाइ सकेका थिए ।
तर परिवारले दिएनन्
केटी हेरेर घर फर्किएपछि उनले अंकलसँग केटी मन परेकाले माग्न जाऔं भने । सुशीलाको हात माग्न त गए । तर, सुशीलाको घरपरिवारले छोरी नदिने भन्दिए । शाक्य विरक्तिएर घर फर्किए । उनको मनले मानेन । उनको दिलमा सुशीला नै थिइन् । शाक्यले भने, ‘ख्याल–ख्यालमा केटी हेर्न गएको साँच्चिकै माया बसेछ, सपनामा समेत उनलाई देख्न थालेँ ।’ उनले त्यसपछि थाहा पाए रूप हेरेर, बोल्दैमा र कसैसँग नजिक हुँदैमा माया हुँदैन । माया भनेको त अनुभूति गर्ने चिज रै’छ ।
उनी भन्छन्, ‘सुशीलालाई देखेको पहिलो नजरमा नै दिलमा बसिन् ।’ कसैलाई म माया गर्छु भन्दैमा माया भइहाल्ने नहुने रै’छ । माया त भित्री हृदयदेखि नै आफै हुने कुरा रै’छ । सुशीलालाई उनका माइतीले नदिने भनेपछि शाक्यले १५ दिनसम्म राम्रोसँग खाना नै नखाएर रोएरै दिन बिताए । उनको त्यो बिजोग देखेर घरपरिवारले फेरि माग्न जाने कुरा गरे । तर, केटी पक्षले आफू श्रेष्ठ ठूलो जाति र शाक्य भनेको सुन बनाउने काम गर्ने सानो जाति भन्दै छोरी नदिने निर्णय गरे ।
अनि भागेर विहे
शाक्यले अब केटी भगाएरै भए पनि ल्याउनुपर्छ भन्दै नेपालगन्ज गए । शाक्यको साथमा उनका मिल्ने साथी गणेश कार्की पनि थिए । घरबाट छोरी नदिने भने पनि सुशीला पढाउन जाने बाटोमा भेट्ने सहमति भयो । कुरा गर्दै थिए । सुशीलाको अण्टी पर्नेले सुशीलालाई पिटिन् । त्यसपछि भने शाक्यलाई सुशीलालाई फकाउन झन् सजिलो भयो । त्यहाँ एक किसिमको कोलाहल नै मच्चियो । सुशीला भने शाक्यसँग बिहे गर्न मानेकी थिइनन् । किनकी उनको सानी बहिनीलाई कक्षा १० सम्म आफूले जागिर गरेर भए पनि बोर्डिङ्गमा पढाउने उनको ठूलो सपना थियो । सुशीलाले बहिनीलाई पढाउनकै लागि खजुराबाट राँझासम्म साइकलमा पढाउन आउँथिन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले बहिनीलाई बोर्डिङ्गमा पढाउने सपना सुशीलाले देखेकी थिइन् । उनले देखेको त्यो सपना पूरा हुन पाएन । गाउँमा सबैले थाहा पाए । अब बिहे गर्नुपर्छ भन्दै प्रवाश र गणेशले उनलाई जबरजस्ती मोटरसाइकलमा बसालेर सुर्खेत ल्याए ।
सुरुमा त सुशीलाले प्रवाशलाई मन पराएकी थिइनन् । तर उनको मायाले जित्यो । सुशीलाले बिहे गर्न नमान्दा उनी रोएर मरिदिन्छु भन्थे । सुशीला भन्छिन्, ‘मैले बिहे गर्दिन भन्दा मरिदिन्छ भन्नुहुन्थ्यो, मलाइ औधी माया गर्नुहुन्थ्यो ।’ त्यसैले पनि उनी प्रवाशसँग भागेर आइन् । उनीहरूले २०५६ साल चैत २८ गते भागी विवाह गरे ।
माइतीको अनुमति विना भागेर विवाह गरेर आएकी सुशीलालाई सुरु–सुरुका दिनमा नरमाइलो लाग्यो । उनी विवाह गरेर आइसके पनि उनका माइतीले छोरी आफ्नो लागि मरी भन्दै छाकसमेत छोडे । जन्मदिने आमा बुबाको पनि आफै सपना हुन्छन् । आफ्ना सन्तानले सुख पाउन भन्ने । अझ छोरी राम्रो र सुख पाउने घरमा विवाह गरिदिने सपना हरेक बाबुआमाको हुन्छ । त्यस्तै सपना सुशीलाका बुबाआमाले पनि देखेका थिए । सन्तानले जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि बाबुआमाको मन हो । धेरै समय आफ्ना सन्तानसँग रिसाएर बस्न सक्दैनन् । सुशीलाका बुबाआमाले पनि एक वर्षमा नै बोलाएर टिका फुकाइ दिए ।
घरमा बुबाको अगाडि कहिल्यै ठाडो शिर बनाएर नबोलेकी सुशीला बिहेपछि घरमा आउँदा छुट्टै संसारमा आए जस्तै लागेको थियो । शाक्यको घरमा सबै जना बाबुआमासँग खुलेर बोलेको देख्दा सुशीलालाई अचम्म लाग्ने गथ्र्यो । उनले भनिन्, ‘हाम्रो माइतीमा कडा संस्कार थियो, बुबाको अगाडि खुलेर हाँस्न पनि पाउँदैनथ्यौं । तर बिहेपछि घरमा नन्दहरू सबै खुलेर कुरा गर्दा अचम्म लागेको थियो ।’ उनलाई आफ्नो नन्द आमाको काखमा बसेको देख्दा पनि अचम्म लाग्ने गथ्र्यो । किनकी उनले जान्ने भएदेखि आमाको काख कस्तो हुन्छ अनुभूति गर्न पाएकी थिइनन् । सबै जना खुलेर कुरा गर्ने भएकाले पनि बिहेपछि घरमा सबैसँग नजिक हुन सुशीलालाई गाह्रो भएन । सहज रूपमा उनले घरपरिवारको मन जित्न सफल भइन् । अहिले सुशीलाले ब्यूटीपार्लर सँगसँगै किराना पसल पनि गरेकी छिन् ।
पिता जीवनकुमार शाक्य र माता रमादेवी शाक्यको कोखबाट २०३४ सालमा नेपालगन्जमा जन्मिएका प्रवाशको बाल्यकाल सुखद्सँगै बित्यो । शाक्य आफ्ना बुबाको जागिरको शिलशिलामा सुर्खेत आए । कक्षा पाँचमा पढ्दादेखि नै उनले व्यापार र पत्रकारिताका बारेमा बुझेका थिए । उनको पत्रिकाको पसल थियो । अनि बुबाले पत्रकारिता गर्ने भएकाले समाचार कसरी लेख्ने भन्ने कुराको सामान्य ज्ञान उनले पाइसकेका थिए । बाल्यकालदेखि नै पत्रकार बन्ने र व्यापारी बन्ने उनको सपना उनले भविष्यमा पूरा पनि गरे । सात वर्ष पत्रकारिता गरेका शाक्यले अहिले आफ्नै द् त्रिरत्न डटकमडटएनपी अनलाइन प्रधानसम्पादक हुन्् । साथै अहिले उनी सामाजिक क्षेत्रमा पनि लागेका छन् । उनी अहिले कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै पटक रक्तदान गर्ने व्यक्तिको रूपमा परिचित पनि छन् । उनले ६८ पटकसम्म रक्तदान गरिसकेका छन् ।
पिता गणेशबहादुर श्रेष्ठ र माता मनमाया श्रेष्ठको कोखबाट २०३५ सालमा नेपालगन्ज खजुरामा जन्मिएकी सुशीलाको बाल्यकाल पनि राम्रोसँग नै बित्यो । सामान्य घरपरिवारमा जन्मिएकी सुशीलाले कक्षा एक देखि १० सम्म आदर्श मावि खजुराबाट गरिन् । खेती किसानी भएकाले घरको काममा उनी अलि बढी नै ध्यान दिने गर्थिन् ।
यो जोडी एकअर्काेको जन्मदिन र विवाह गरेको दिनको सम्झनामा उपहार साटासाट गर्न पनि बिर्सदैंनन् । एक अर्काेको जन्मदिन राती १२ बजे उठेर एकअर्काेलाई शुभकामना पनि दिने गरेको उनीहरू बताउँछन् । शाक्यलाई सुशीलाले आफूलाई सम्बोधनमा ‘तपाईं’ भन्दा अप्ठ्यारो लाग्ने गर्छ । पराइ बनाएर भनेको जस्तो लाग्ने गर्छ । त्यसैले सुशीलाले शाक्यलाई तिमी भन्ने गर्छिन् । जीवनसाथी भएपछि दुवैमा बराबरी सम्मान हुनुपर्ने उनीहरूको मान्यता छ ।
दुर्घटनाको नमिठो क्षण
यो जोडीको जीवनको सबैभन्दा बिर्सनै नसक्ने तितो क्षण भनेको प्रवाशको दुर्घटना हुँदाको क्षण हो । २०७१ कात्तिक २९ गते सानो बिउरेनीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा र टाउकोको अप्रेशन गर्नु पर्दाको क्षण जीवन कै सबैभन्दा तितो क्षण हो । उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रो जीवनकै सबैभन्दा बिर्सनै नसक्ने नराम्रो क्षण भनेको त्यही दुर्घटना हो ।’ शाक्य दुर्घटना हुँदा सुशीलाले गरेको माया र स्याहारले शाक्यलाई अझै पनि उनकै मायाले बचाएको जस्तै लाग्छ । उनीहरु भन्छन्, ‘एकअर्कामा माया ममता हुन जरुरी छ, यसले सम्बन्धलाई अझ गाढा बनाउँछ ।’